सानो काम ठूलो तामझाम- सडकमा हिलैहिलो ब्रुमरले काम पाएन – Nepal Japan
नेपाली समय : 12:05:33
जापानी समय : 03:20:33
सानो काम ठूलो तामझाम- सडकमा हिलैहिलो ब्रुमरले काम पाएन
13 September, 2019 13:19 | जल/वातावरण/स्वास्थ्य | comments | 23850 Views
सानो काम ठूलो तामझाम हुन्छ नेपालमा, अरु मुलुकमा दशकौं अघिदेखि सुरु भएका काम यहाँ सुरु गर्ने उद्घोष मात्रै गर्दा पनि आकाशै झारेको फुर्ती लगाउनेहरु जब त्यो कामबाट जनताले सुविधा पाउँदैनन् तब ढाकछोप गर्ने बहाना खोज्छन् । यस्तै अवस्था छ अहिले काठमाडौंका सडकको जसलाई सफा गर्न भनेर ब्रुमर ल्याएर उद्घाटन गरियो तर सडकमा धुलो घट्नुको साटो अरु बढेको छ ।
यसको कारण स्पष्ट छ ब्रुमरले धुलो सफा गर्ने हो हिलो हैन, काठमाडौंका सडक अहिले पानी परे हिलो र घाम लागे धुलोको कुहिरीमण्डल हुन्छ । यसले सर्वसाधारण आजीत छन् तर सरकार र सम्बन्धित निकाय सडकमा धुलो छैन, मास्क लगाएर हिंड्नु पर्दैन भन्दै दिउँसै अध्यारो पार्ने प्रयास गरिरहन्छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत चैत दोस्रो साता पाँच थान ब्रुमर किनेको थियो । असार १ गते चीनको छेन्दु नगरले दुई थान ब्रुमर हस्तान्तरण गरेपछि महानगरमा सात थान ब्रुमर छन् । बर्खा लागेपछि ब्रुमरले सडक सफा गरेका छैनन् । सडकमा धुलो नदेखिनु पर्नेमा ब्रुमर नै देखिन छाडे ? यसको कारण हो ब्रुमरले हिलो सफा गर्दैन । काठमाडौंका सडक हिलोमुक्त नहुँदा हिलो र धुलोको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
सडकलाई सफा र धुलोरहित बनाउन पानीपरेका बेला हिलो नहुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ तर मुख्य सडक बाहेक भित्री गल्लीहरुको हालत कस्तो छ सबैले देखेकै छां । त्यसैले हिलो सडकमा ब्रुमर गुडेका छैनन् र धुलो बढेको छ ।
ब्रुमरले एक रातमा १३ स्थानमा सफा गर्दा १८ टन धुलो (भिडियोसहित)
भदौ अन्तिम सातासम्म पनि वर्षा थामिएको छैन । महानगरभित्रका सडकमा खाल्डाखुल्डी थुप्रै छन् । बर्खामा पानी जमेपछि खाल्डा बढेका छन् । खाल्डाखुल्डी भएका सडकको धुलो ब्रुमरले बढार्न सक्दैन । मिलेको, चिल्लो सडक छ भने धुलो उठाउन सजिलो हुन्छ । उसो भए सडक चिल्लो र सम्म बनाउन कसले रोक्यो त ? प्रश्न यो पनि हो ।
वर्षा सुरु हुनुअघि महानगरले रातिको समय आठ घण्टासम्म सडकमा ब्रुमर चलाएर धुलो उठाउने गरेको थियो । सुरूका दिनमा केही दिन सडक सफा देखिए पनि बर्खा लागेपछि सडकमा धुलो र हिलो छ । ब्रुमरले एक पटकमा सडकबाट सात घनमिटर धुलो संकलन गर्न सक्छ । धुलो र पातपतिङगर संकलन गर्नका लागि ब्रुमर प्रयोग गरिएको हो । ब्रुमरले नौ घनमिटर पानी बोक्न पनि सक्छ । सडक सफा गर्दा पहिले पानी छर्केर धुलो नउड्ने बनाएपछि मात्रै यसले धुलो र पतिङगर तान्छ । ब्रुमरले प्रतिघण्टा तीन किलोमिटरदेखि सडकको अवस्था हेरेर २० किमीसम्म सफा गर्न सक्छ ।
उपकरण ल्याएपछि सो उपकरण उपयोग गर्ने स्थान पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । दरबारमार्ग, कान्तिपथ सडकका बीचभाग धुलोरहित भए पनि पेटी किनार धुलोरहित पहिले पनि देखिएको थिएन । यसका लागि सडकका संरचना सोही अनुसारको हुनुपर्ने हो । तर, भौतिक पूर्वाधार विकासका नारा जति घन्के पनि कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो छ । असारे विकासले अरु समस्या थपेको छ ।